ကောက်ပဲသီးနှံကုသမှု | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ကောက်ပဲသီးနှံကုသမှု ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မီးခိုးနှင့်အစေ့ကုသ၏ဤဌာနေထုံးစံတစ်ခုသီးနှံများ၏အပင်ပေါက်ရန်အတွက်များနှင့်ပျိုးသန်စွမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်(မိုဒီ,2002,2004,Paasonen et al.,2003).မီးခိုးလက်ရှိကျယ်ပြန့်သောကွောငျ့ယင်း၏ stimulatory ဂုဏ်သတ္တိများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်. (Sparg et al.2006)မသာကြောင်းအပင်ပေါက်ရန်အတွက်၏ရာခိုင်နှုန်းပြသ,ဒါပေမယ့်လည်းစီးပွားဖြစ်ပြောင်းဖူးအမျိုးမျိုး၏ပျိုးပင်သန်စွမ်း Aerosol မီးခိုးနှင့်မီးခိုးအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ် အသုံးပြု. တိုးမြှင်နိုင်-ရေစို.ထိုကွောငျ့,မီးခိုးကုသမှုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်သာမြှင့်တင်ပါဘူး,ဒါပေမယ့်လည်းပျိုးပင်သန်စွမ်းလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်(Brownet အယ်လ်.,2003,Sparg et al.,2005).ဤသည်မီးခိုးစက်ရုံဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အပြန်အလှန်အချို့ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်ကွောငျးဖျောပွသ.
gymnosperm ၏ခြောက်သွေ့တဲ့စက်ရုံပစ္စည်းကနေပြင်ဆင် aqueous မီးခိုးကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ(အရွက်)နှင့် angiosperms ၏နံပါတ်အလင်း၏အပင်ပေါက်ရန်အတွက်တစ်ဦးအပြုသဘောတုန့်ပြန်ပြသ-အထိခိုက်မခံဆလတ်မျိုးစေ့များ(Iager et al.,1996).ဤသည်စက်ရုံပစ္စည်းတစ်ခုအကွာအဝေးတစ်ဦးမီးခိုးစတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်ပြင်ဆင်နေများတွင်အသုံးပြုနိုင်ဆိုတာကိုပြသ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/grain-treatment.html
ကောက်ပဲသီးနှံကုသမှု ထုတ်လုပ်သူနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံကုသမှု ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 9,165 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com